​के सुनकाण्डमा प्रहरीहरु फसेका हुन् ?
Tuesday,5Jun, 2018 2:09 PM
काठमाडौं । मोरङ जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको विषयलाई लिएर आइतबार तीन पूर्व प्रहरी अधिकारीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर जेल परेका प्रहरी अधिकारीहरुको पक्षमा बोलेपछि त्यसले तरंग ल्याएको छ । जेल परेका प्रहरी निर्दाेष रहेको र सो प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै उनीहरुले आफु निकट पत्रकारहरुलाई बोलाएर बिफ्रिङ गरेका थिए ।
पूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी तथा पूर्व डिआईजीहरु हेमन्त मल्ल ठकुरी र रमेश खरेलले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले जेल परेका एसएसपी दिवेश लाहेनी लगायत प्रहरी निर्दाेष भएको दाबी गरे । कतिपयले उनीहरुको कदमलाई प्रशंसा गरेका छन् भने केहीले न्यायधीश शैलीमा त्यसरी बोलेको भन्दै उनीहरुको आलोचना गरेका छन् ।
आईजिपीहरु नालायकः खरेल
पूर्व डिआईजी खरेलले सुन तस्करी घटनाको निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान हुन नसक्दा यसले प्रहरी संगठनलाई नै कमजोर बनाउने जोखिम बढेको बताए । संगठित किसिमको अपराधको शैली बुझेको प्रहरी नेतृत्वले समेत यसमा केही नबोल्नु प्रहरी महानिरीक्षकहरुको नालायकीपन भएको खरेलको आरोप छ । अहिलेका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल तथा निवर्तमान महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले आफ्ना अधिकृतहरुलाई अन्याय हुनबाट रोक्न नसक्नु उनीहरुको नालायकी भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सो प्रकरणमा पक्राउ परेका दिवेस लोहनी लगायत केही प्रहरी अधिकारीहरु निर्दाेष भएको दाबी गरे । ‘दिवस लोहनी जस्तो प्रहरी अधिकृतमाथि हचुवाको भरमा कारवाही हुँदा भोली अनुसन्धानमा प्रहरी निकै कमजोर हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो घटनामा अर्काे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ ।’
गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिका संयोजक(सहसचिव ईश्वरराज पौडेल) इमान्दार व्यक्ति हुनसक्ने तर, उनमा अनुसन्धानको अनुभव नै नभएको भन्दै उनले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न नसकेको खरेलको दाबी छ । लोहनी रामो अधिकृत भएकाले उनलाई फसाउन उनकै ब्याचका अन्य प्रहरीहरु समेत लागेको खरेलको आरोप थियो ।
पूर्व एआईजी भण्डारीले अन्डरकभर अनुसन्धानमा पैसाको डिल लगायत विभिन्न तरिका अपनाउने र त्यसकै आधारमा उनीहरुलाई समेत प्रतिवादी बनाउनु गलत भएको बताए । त्यस्तै पूर्व डिआईजी मल्लले अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न पैसाको बार्गेनिङ गर्ने अनुसन्धान पद्धती भएको र त्यही आधारमा राम्रा अधिकृतहरुलाई प्रतिवादी बनाउनु गलत भएकाले थप छानबिन गरिनुपर्ने बताए ।
के थियो उनीहरुको गल्ती ?
विमानस्थलबाट तस्करी भएको साढे ३३ किलो सुन हराएपछि लुटिएको आशंकामा विभिन्न व्यक्तिहरुमाथि सोही समूहका चुडामणि उप्रेती गोरेले सोधपुछ गरेका थिए । जसमध्ये सनम शाक्यमाथि धेरैको शंका थियो । उनले आफु भारत रहेको भनेर काठमाडौं बसेकाले पनि उनीमाथि शंका धेरै भएको हो ।
त्यहीकारण उनलाई नियन्त्रणमा लिएर जंगलमा लगेर करेन्ट लगाइएको थियो । जसक्रममा उनको मृत्यु भएको थियो ।
शाक्यको मृत्युको सुचना महानगरीय अपराध महाशाखाका सइ बालकृष्ण सञ्जेलले पाए । उप्रेतीले नै सञ्जेललाई फोन गरेर सूचना दिएका थिए ।
सोही आधारमा अपराध महाशाखाका तत्कालिन एसएसपी दिवेश लोहनीले डिएसपी प्रतिज केसीको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरी टोलीलाई अनुसन्धानका लागि पूर्व पठायो । सोही टोलीले शाक्यको शव धरानमा बरामद गरेको थियो । तर, त्यो शव विराटनगरमा बरामद भएको भनेर मुचुल्का गरिएको थियो । साथै घटना मिलाउन २ करोड रुपैयाँको डिल भएको दाबी गरिएको छ । तर, मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ नै लाई पक्राउ गर्न प्रहरीले सो डिल गरेको अनुसन्धान अधिकृतहरुको दाबी छ ।
अनुसन्धानको क्रममा महाशाखाले गलत नियत राखेको र मुख्य व्यक्तिलाई जोगाएको आरोप लाग्यो । छानबिन समितिले गलत नियतले पैसाको दाबी गरेको भन्दै महाशाखाका तत्कालिन प्रमुख एसएसपी लोहनी, डिएसपी केसी र सइ बालकृष्ण सञ्जेललाई समेत प्रतिवादी बनाएको थियो ।
हत्यामा संलग्न नभएका सो समूहका दुई व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएको तर, मुख्य नाइके उप्रेतीलाई जोगाएको उजुरीका आधारमा गृह मन्त्रालयले सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिको अनुसन्धानमा ५ वर्षदेखि सो समूहले विमानस्थानबाट सुन तस्करी आएको रहस्य खुलेको थियो । त्यसपछि विभिन्न अभियुक्तहरुलाई पनि पक्राउ ग¥यो ।
तस्करीमा सहयोग गरेको आरोपमा ७ प्रहरी अधिकारी पनि पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका पूर्व डिआईजी गोविन्द निरौला, एसएसपी श्याम खत्री, एसपी विकासराज खनाल र डिएसपी संजय राउत, हवल्दार अमर बहादुर थापा र जवान विष्णु खड्काले तस्करहरुसँग पैसा लिएको प्रमाण समेत भेटिएको थियो। तर, अनुसन्धानमा लापरबाही गरेकै आधारमा अन्य तीन प्रहरीलाई समेत त्रफाउ गरेर प्रतिवादी बनाइएकोमा कतिपयले उनीहरुमाथि अन्याय भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । खासगरी एसएसपी लोहनीको पृष्ठभुमीका आधारमा धेरैले उनीमाथि अन्याय भएको बताउँदै आएका छन् । यही बेला पूर्व तीन प्रहरी अधिकारीहरुले समेत सार्वजनिक रुपमै उनीमाथि अन्याय भएको बताएका हुन् । सो प्रकरणमा पक्राउ परेका लोहनी, केसी र सञ्जेल तीनै जना पुर्पक्षका लागि सनुसरीको झुम्का कारागारमा छन् ।
उनीहरुको पत्रकार सम्मेलनले छानबिन समितिलाई पनि दबाब दिएको छ । तीन जना प्रहरीको हकमा कतै पनि प्रष्ट प्रमाण छैन । पैसाको डिल गरेको उल्लेख छ । तर, छानबिन समितिबाटै सार्वजनिक भएको फोन रेकर्डमा त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार छै्रन । गोरे र प्रहरी अधिकारीहरुबीच भएको फोन वार्तामा उप्रेती प्रहरी अधिकारीहरुसँग ढुक्क हुन सकेको छैनन्। पक्राउ पर्ने डरले उनी भारत भागेका छन् ।
पक्राउ परेपछि पनि उनले दिएको बयानमा आफु पक्राउ पर्ने डरले भागेको बताएका छन् । अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउन पैसा लिएको कुनै आधार देखिन्न ।
तर धरानमा बरामद भएको शवलाई मोरङ भनेर देखाउनु, एक दिन शव गाडीमा राखेर होटलमा अभियुक्तहरुसँगै सुत्नुले प्रहरीको कमजोरी देखिन्छ । मुचुल्का प्रतिवेदनमा उप्रेतीलाई प्रतिवादी नबनाउनु डिएसपी प्रजित केसी र सइ बालकृष्ण सञ्जेलको कमजोरी थियो । अर्काेतर्फ शव बरामदको क्रममा स्थानीय प्रहरीसँग समन्वय नगर्दा समेत समस्या भएको थियो । तर, सोही आधारमा उनीहरुलाई प्रतिवादी बनाउनुले उनीहरुमाथि अन्याय भएको छ । सो घटनामा उनीहरु पूर्ण रुपमा निर्दाेष देखिन्नन् । तर, जति गल्ती हो सोही अनुसार विभागीय सजाय हुनुपर्दथ्यो । अनुसन्धानमा लापरबाही भएकै आधारमा संगठनका राम्रो पृष्ठभुमी भएका प्रहरी अधिकृतलाई जेल हालेपछि धेरैले यसलाई ‘अन्याय’का रुपमा लिएका हुन् ।